गंगामाया अधिकारीको बयान : यसकारण मैले अनसन तोडिनँ - Himalayan Kangaroo
गंगामाया अधिकारीको बयान : यसकारण मैले अनसन तोडिनँ
Posted by Himalayan Kangaroo | २ असार २०७५, शनिबार ०५:५३ |
काठमाडौँ । आमा भएर बाँच्नु साह्रै गाह्रो रहेछ, खास गरी सन्तान मारिएपछि । न्याय खोज्दा उल्टै पतिले पनि ज्यान गुमाएपछि त म एकदम एक्ली भएकी छु । त्यसपछि मलाई एक क्षण पनि बाँच्न मन भएन ।
‘कति सुतिरहनु हुन्छ आमा ?’ भन्दै मलाई कुर्न बसेका हवल्दार टोपबहादुरले कपालमा समातेर झकझक्याएपछि मेरो होश आयो।
‘के तीतो हालिदिएको यो ?’ म सकिनसकी कराएँ।
‘सिस्टर, उहाँको खुट्टामा रोटी सेकाएको हो ?’ आसिकरामले सोधेका थिए।
के कसो भएको हो भनेर मलाई उनीहरुले दुई घण्टासम्म सोधपुछ गरे। बाबुराम दाइहरु भन्नु हुन्थ्यो अब चाहिँ केही हुन्छ। त्यो पर्खेर म आजका दिनसम्म बसिरहें। तर भएको चाहिँ केही होइन।
छोराको हत्या गर्नेलाई कारबाही होस् भन्दा आज मेरो सारा परिवार लथालिंग हुन पुग्यो। यो अवस्थामा म अब बाँच्नुको के सार? त्यसैले म बिन्ती गर्छु, अब मलाई झुठा कुरा गरेर थामथुप पार्न कोही नआउनु। म जे छु, ठीकै छु, विथोल्न कोही नआउनु !
Previousदेशैभर हिलोसहितको वर्षा
Next‘रेस ३’ सलमानको महाझुर फिल्म : समीक्षक
अष्ट्रेलियामा गाडीमा कम्बल मुनि बच्चाहरु राखेर हिंडेका व्यक्तिलाई ३३ डिमेरिट पोइन्ट्स
१७ बैशाख २०७६, मंगलवार १०:१५